I-PCB ephezulu ye-TG - iShenzhen Fumax Technology Co, Ltd.
I-Fumax - Umenzi wezinkontileka ongcono kakhulu wama-PCB aphezulu we-TG eChina. Sinikeza indlela yomhlaba wonke yezinsizakalo ze-PCB. Futhi sinikeza ukukhethwa okubanzi kwezinsizakalo zokukhiqiza imikhiqizo esezingeni eliphakeme ye-PCB kungaba nge-FR-4 noma ezinye izinto ezisezingeni eliphakeme zokumelana nokushisa nokumelana nokushisa kwe-TG. Ngakho-ke siyakwazi ukwenza ukubumbela kwe-PCB esezingeni eliphakeme yezicelo zezimboni, zezimboni nezokushisa okuphezulu. Singakwazi ukukhiqiza ama-PCB aphezulu we-TG anenani le-TG elifinyelela ku-180 ° C.
Ububanzi bomkhiqizo we-High TG PCB onganikelwa yiFumax：
* Ukumelana nokushisa okuphezulu;
* I-Lower Z-axis CTE;
* Ukumelana okuhle nokucindezela okushisayo;
* High ezishisayo ukushaqeka ukumelana;
* Ukuthembeka okuhle kwe-PTH;
* Izinto ezidumile ze-TG High: S1000-2 & S1170, Shengyi materials, IT-180A: ITEQ material, TU768, TUC material.
* Ungqimba layers 2-28 izingqimba） ；
* Usayizi PCB （Min. 10 * 15mm, Max.500 * 600mm） ；
* Kuqediwe ukujiya kwebhodi （0.2-3.5mm） ；
* Isisindo sethusi （1 / 3oz-4oz） ；
* Surface Qeda （HASL nge lead, HASL lead free, Ukucwiliswa igolide, Ukucwiliswa isiliva, Ukucwiliswa Tin） ；
* Izivikeli ezinekhono le-Solder （RoHS） ；
* Isifihla-buso Solder
* Isilikisi （Okumhlophe / Okumnyama） ；
* Amathrekhi wethusi amancane / izikhala sp 3 / 3mil） ；
* Min izimbobo （0.1mm） ；
* Ikhwalithi yeBanga （IPC II Ejwayelekile）.
I-High-TG elinye igama le-PCB enezinga eliphezulu lokushisa, okusho ukuthi amabhodi wesifunda aphrintiwe aklanyelwe ukumelana nokushisa okushisayo okuphezulu. Ibhodi lesifunda lichazwa njenge-High-TG uma izinga lokushisa lengilazi lalo (TG) liphakeme kune-150 degrees Celsius.
Amazinga okushisa aphezulu angaba yingozi kuma-PCB angavikelekile, alimaze ama-dielectrikhi nama-conductor, kwakheke izingcindezi zomshini ngenxa yokwehluka kwamazinga okukhula okushisayo futhi ekugcineni kudale konke kusuka ekusebenzeni okungahambelani kuya ekuhlulekeni ngokuphelele. Uma izinhlelo zakho zokusebenza zisengcupheni yokufaka ama-PCB akho emazingeni okushisa aqatha noma i-PCB iyadingeka ukuthi ihambisane ne-RoHS, kuzokuthakazelisa kakhulu ukubheka ama-High-TG PCB.
* Amabhodi amaningi wezendlalelo anezendlalelo eziningi
* Finace trace izakhiwo
* Ubuchwepheshe bezimboni
* Izithuthi ze-elekthronikhi
* Ukushisa okuphezulu kwe-elekthronikhi